Ukuthola Amathuba Okumaketha Okuzenzakalelayo | Martech Zone
Ukuthola Amathuba Okumaketha Okuzenzekelayo
NgoMsombuluko, Mashi 21, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 16, 2013 Douglas Karr
Sisebenza kanzima ukushintsha izinqubo zamakhasimende ethu. Njengoba uqala ukucabanga ngemizamo yakho yokumaketha, usichitha kuphi isikhathi esiningi ngokweqiniso? Izinkampani zivame ukwehlisa noma zisibukele phansi kakhulu isikhathi esisithathayo ukuhamba phakathi kwezinqubo. Thina kusanda kuthunyelwa mayelana nesikhathi esithathayo ukurekhoda imikhondo namaphoyinti wokuthinta ku-CRM - nomkhiqizo owenza umsebenzi ube lula.
Amathuba ukuthi wenza lokhu usuku lonke ngemizamo yakho yokumaketha, kepha awukuqapheli. Noma into elula njengokuthumela iTwitter kubalandeli bakho ingahle ibukeke ingeyokuzithoba… kepha uma ufuna ukufaka isixhumanisi futhi ulandelele ukuthi i-Tweet ibuyele kuhlelo lwakho lwe-Analytics, ingakudinga ukuthi ufake amathegi noma okokuhlonza umkhankaso, unciphise umuntu wesithathu Isifinyezi se-URL, hlola isixhumanisi esifushane… bese uthumela i-tweet.
Lokhu kuvele kwaguqula i-tweet yaba ngumzamo impela. Uma uphinda lesi senzo isikhathi nesikhathi, uzodla isikhathi esibalulekile. Thatha isikhathi uzihlole ngokwakho. Ngokuzayo lapho ubhala okuqukethwe, uguqula idatha, noma uhlaziya imiphumela… phawula izikhathi lapho uthatha izinyathelo. Uzothola ukuthi ukwenza umsebenzi uqobo kuthatha okungaphansi kakhulu kunezinguquko phakathi.
Lezo zinguquko ziyigolide futhi zinikeza ithuba lokutshala imali kuzinhlelo zokusebenza zokumaketha. Kalula nje, ukumaketha okuzenzakalelayo kukuvumela ukuthi wenze okuningi ngezinsizakusebenza ezimbalwa. Futhi izikhathi eziningi, ukuzenzekelayo kokumaketha kunganciphisa ubungozi bephutha lomuntu! Njengomkhulu URon Popeil ithi, “Yibeke bese uyikhohlwa!”
Njengoba ngithanda ukusho, "Kukhona uhlelo lokusebenza lolo!"
Tags: jquery scrollTopbukhoma ividiyowpengine
IJesubi: Isizukulwane Sesidingo Esenziwe Lula
I-Compendium Ikhipha i-imeyili Kuthunyelwe